မွတ်ဆလင် များပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး အ ဖွဲ့ (အို အိုင် စီ) က ရိုဟင်ဂျာ ဟုကိုယ်ဖာသာခေါ် သော ဘန်ဂါလီ များ အ တွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ တောင်း ဆို ပေး နေပါ တယ်. ဒီ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်နေ သော ( ၈၈ ) ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ဟာ ရခိုင် တွေဘက်ကရပ်တည်ပေး နိုင် ပါ စေ လို့ ဆုတောင်း လိုက် ပါ တယ်. « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » မွတ်ဆလင် များပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး အ ဖွဲ့ (အို အိုင် စီ) က ရိုဟင်ဂျာ ဟုကိုယ်ဖာသာခေါ် သော ဘန်ဂါလီ များ အ တွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ တောင်း ဆို ပေး နေပါ တယ်. ဒီ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်နေ သော ( ၈၈ ) ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ဟာ ရခိုင် တွေဘက်ကရပ်တည်ပေး နိုင် ပါ စေ လို့ ဆုတောင်း လိုက် ပါ တယ်.
မွတ်ဆလင် များပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး အ ဖွဲ့ (အို အိုင် စီ) က ရိုဟင်ဂျာ ဟုကိုယ်ဖာသာခေါ် သော ဘန်ဂါလီ များ အ တွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ တောင်း ဆို ပေး နေပါ တယ်. ဒီ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်နေ သော ( ၈၈ ) ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ဟာ ရခိုင် တွေဘက်ကရပ်တည်ပေး နိုင် ပါ စေ လို့ ဆုတောင်း လိုက် ပါ တယ်.
မွတ်ဆလင် များပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး အ ဖွဲ့ (အို အိုင် စီ) က ရိုဟင်ဂျာ ဟုကိုယ်ဖာသာခေါ်သော ဘန်ဂါလီ များ အ တွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ တောင်း ဆို ပေး နေပါ တယ်. ဒီ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်နေ သော ( ၈၈ ) ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ဟာ ရခိုင် တွေဘက် ကရပ်တည်ပေး နိုင် ပါ စေ လို့ ဆုတောင်း လိုက် ပါ တယ်.
The Organisation of Islamic Cooperation (OIC; Arabic: منظمة التعاون الإسلامي‎; French: Organisation de la Coopération Islamique, OCI)is an international organisation consisting of 57 member states attempting to be the collective voice of the Muslim world and to safeguard the interests and ensure the progress and well-being of its member countries. The OIC hasapermanent delegation to the United Nations, and is the largest international organisation outside the United Nations. The official languages of the OIC are Arabic, English and French.
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်ရောက်ှိနေပါတယ်။
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ကုလလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံ တက်ရောက်မည်
ဒီဗွီဘီ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် (တနင်္လာနေ့)
ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအမည်နဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးကြွယ်ဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်တက်ရောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်အတွက် ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ရန်ကုန်ကနေ
စတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် ဒေသတွင်းမဟာဗျူဟာ ဆွေးနွေးပွဲ တခုကို တက်ရောက်မှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံ တက်ရောက်ဖို့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကို ဆက်လက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဌေးကြွယ်က ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကို တခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးလေ့လာလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ပြီတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ယူအန်ကနေပြီး စောင့်ကြည့်ကူညီနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။”
ဦးဌေးကြွယ်ဟာ လာမယ့် မတ်လထဲမှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဆက်လက်သွားရောက်ဖို့ရှိပြီး အမေရိကန်ရောက် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေပါတယ်။
(သတင်း – DVB TV News)
← One hundred hours in Burma: A photo diary http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/02/28/one-hundred-hours-in-burma-a-photo-diary/	The Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. (UMEH) and Myanmar Economic Corporation (MEC) are reported to give extensive business opportunities to the military leadership →